Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Uthando olutsha lwe-CNN lwe-Samsung: Kwaye luyahlawula!
I-CNN kunye neqabane le-Samsung kwiphulo lehlabathi jikelele lokuphonononga amandla afanelekileyo obuchwepheshe
I-CNN International Commercial (CNNIC) idibene ne-Samsung Electronics (i-Samsung) kwiphulo lokukhangisa elibonisa amandla obuchwepheshe bokwakha ikamva elingcono kunye nokunceda abantu banqobe imingeni ngokusebenzisa izinto ezintsha zobuchwepheshe.
Ngochungechunge lwefilimu enegama elithi 'Better Tech For All' kunye nokulungelelaniswa kwegama kunye nenyathelo lokuhlela 'iTech for Good', eli phulo liza kudibanisa i-Samsung kunye nababukeli behlabathi be-CNN ukubonisa indlela abantu ababusebenzise ngayo ubuchwepheshe obutsha ukuzixhobisa kunye noluntu lwabo.
Better Tech For All', Uthotho lomxholo oveliswe yi-CNNIC's studio ephumelele ibhaso yehlabathi jikelele dala, ilandela umxholo oqhelekileyo wezinto ezintsha ezimangalisayo ezivumela abantu ukuba baphumelele kwaye banqobe imingeni ngokusebenzisa iteknoloji. Ifilimu yokuqala 'Isayinwe Ngothando' equka uDavid Cowan, itoliki yentetho yezandla ecacileyo oye wanceda kwizibhengezo ezisemthethweni zaseGeorgia eUnited States kwaye ebetolikela abaphulaphuli abazizithulu phantse iminyaka engamashumi amathathu. Utyhila indlela itekhnoloji eyenze ukuba ulwazi lufikeleleke ngakumbi kwaye luphucule umgangatho wobomi boluntu olungevayo. Njengenxalenye yokuzibophelela kwe-CNNIC ekuzinzeni, i-Create ijoyine i-Advertising Association ye-Ad Net Zero initiative kwaye le yifilimu yokuqala yokuDala ukuveliswa kwekhabhoni ngokungathathi hlangothi usebenzisa i-Albert carbon calculator ukunciphisa i-carbon footprint. Jonga oku emva kwe-scene imifanekiso ukufunda ngakumbi malunga nendlela amaqela emveliso kwihlabathi liphela ayalathisa ngayo le filimu inika umdla.
n ukongeza, i 'Tech for Good' series isungulwe kunyaka wesibini ngokulandelelana, ngentsebenziswano Samsung. Ibanjwe yi-ankile ye-CNN kunye nomnxibelelanisi UKristie Lu Stout, ixesha lesibini le 'Tech for Good' yasungulwa ngoJulayi kulo nyaka kwaye iqulathe iziqendu ezine zemizuzu engama-30 ukuya kuthi ga ngoNovemba kwi-CNN International TV, enomxholo owongezelelweyo kwiiplatifti zedijithali kunye nezentlalo, ukuhlola indlela iteknoloji ebanceda ngayo abantu kunye noluntu olubanzi kuyo yonke into ukusuka kwimfundo ukuya kuzinzo.
“Kuhlala kulilungelo ukusebenzisana nenkokeli yoshishino efana neSamsung ngenyathelo elikhuthazayo leqonga elibonisa amandla etekhnoloji,” utshilo. URob Bradley, uSekela Mongameli oPhezulu, iCNN International Commercial. "Ukubalisa amabali asemgangathweni ngokusetyenziswa kokuqonda kwedatha kunye nohlalutyo kwenza isisombululo esitsha esiza kudibanisa iibrendi kunye nabaphulaphuli abaphambili kwihlabathi liphela. Sijonge phambili kule ntsebenziswano ikhuthaza abaphulaphuli beCNN ukuba bacinge ngekamva kwaye baphucule ubomi babanye ngokudala itekhnoloji elungileyo. "